आइतबार राजधानीमा आयोजित सञ्चारकर्मी भेटघाटमा नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यबाहक सभापति विमलेन्द्र निधिले एमाले नेता माधव नेपालको प्रजग कोरिया भ्रमण 'कूटनीतिक मर्यादाविपरीत' भएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनको भनाई थियो, 'संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नाकाबन्दी लगाएको अवस्थामा त्यसकै सदस्य राष्ट्रका पूर्वप्रधानमन्त्रीले भ्रमण गर्नु आपत्तिजनक छ।'(कान्तिपुर दैनिक, १२ भदौ) भारत भ्रमणको क्रममा प्रम शेरबहादुर देउवाको प्रस्तुतिप्रति आपत्ति जनाउँदै एमाले अध्यक्ष ओली र कार्यबाहक अध्यक्ष वामदेव गौतमले दिएको अभिव्यक्तिको प्रतिउत्तर दिन आयोजित पत्रकार भेटघाटमा निधिले त्यसो भनेका हुन्।
आफ्नो सभापपतिको भारत भ्रमणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षले गरेको विरोधको रिस फेर्न निधिले प्रजग कोरियालाई जोडेका छन्। कसैले आफूलाई विरोध गरेको झोंकमा बेप्रसङ्गको कुरा गर्नुलाई कुतर्क गरेको भनिन्छ। निधिले पनि प्रतिपक्षको विरोधलाई कुतर्कले जवाफ दिएका छन्। साँच्चै नेपालको कोही नागरिक वा सरकारी प्रतिनिधि प्रजग कोरिया जानु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत हो त?
प्रजग कोरियाली राजदूतावास काठमाडांैमा छ। प्रजग कोरिया र नेपालबीच पुरानो कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित छ। त्यसकारण कोही पनि नेपाली नागरिक प्रजग कोरियाको ऐनकानुन र बन्दोबस्तअनुसार त्यहाँ जान–आउन पाउँछन्। सरकारी स्तरमै कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको अवस्थामा नेपालको सरकारी प्रतिनिधि पनि प्रजग कोरियामा जान सक्छन्। आउने–जाने काम भइरहेको पनि छ। प्रजग कोरियाका सयौं नागरिक नेपालमा विभिन्न रोजगारी गरिरहेका पनि छन्। साथै प्रजग कोरिया पनि संरा सङ्घको सदस्य देश पनि हो। त्यस परिस्थितिमा नेपालको पूर्वप्रधानमन्त्री त के, पदासीन पदाधिकारी पनि प्रजग कोरिया जान आउनमा कुनै समस्या होइन।
नेपालसँग कुनै कूटनीतिक सम्बन्ध नभएका देशहरू लिविया, अफगानिस्तान, इराक र सिरिया जस्ता देशहरूमा नेपाली युवा–युवती ज्यान हत्केलामा राखेर श्रम गरिरहेका छन्। त्यसमा कूटनीतिक मर्यादा नदेख्नु अनि नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध जोडिएको देशमा कोही नेपाली नागरिक जानु कसरी कूटनीतिक मर्यादाविपरीत
प्रजग कोरियामाथि संरा सङ्घको नाकाबन्दी नयाँ होइन। विगत लामो समयदेखि राष्ट्र सङ्घमात्र होइन बरू संरा अमेरिकालगायतका साम्राज्यवादी देशहरूले पनि प्रजग कोरियामाथि नाकाबन्दी थोपरेको छ। तथापि धेरै पटक संरा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जिम्मी कार्टर, अमेरिकी बास्केटबल खेलाडी डनिस रोडम्यानलगायतका अमेरिकी नागरिक र पत्रकार प्योङयाङ पुगेका छन्। प्रजग कोरियामा पुगेर त्यहाँको ऐन–कानुनको अपमान गर्नेलाई प्योङयाङ सरकारले कार्यबाही पनि गरेको छ। साथै प्रजग कोरिया र कोरियाली जनताप्रति सम्मान गर्ने व्यक्तिलाई प्रजग कोरियाली सरकारले सम्मान गरेको पनि छ। संसारका धेरै देशका नागरिक दैनिक रूपमा त्यहाँ जानेआउने गरेका छन्। के कार्टर, रोडम्यानलगायत संसारका सबै राजनीतिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक प्रतिनिधि र कम्युनिष्ट पार्टी तथा प्रगतिशील पार्टीका नेता त्यहाँ जानु कुटनीतिक मर्यादाविपरीत हो?
माधव नेपाल वा अरू जो कोही नेपाली नागरिक वा सरकारी प्रतिनिधि प्रजग कोरिया जानु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत कदापि होइन। यो निधिले रिस फेर्न गरेको कुतर्क र वामपन्थी खेमाप्रतिको पूर्वाग्रहमात्र हो। राजनीतिमा सबभन्दा खतरनाक हुन्छ–कुतर्क गर्नु। कुतर्क गरेर आफ्नो गलत कुरालाई सही प्रमाणित गर्नु फोहोरी राजनीति हो। उपप्रधानमन्त्री बनिसकेका निधिले आज त्यही गरेका छन्। रिस उठ्दैमा नभएको कुरा गर्नु निधिको राजनीतिक कुतर्कमात्र हो।